DXVK 1.7.3 inouya nemagadziriso, mashoma mashoma shanduko, asi nezvisimudziro kune shaders | Linux Vakapindwa muropa
DXVK 1.7.3 inosvika iine zvigadziriso, mashoma mashoma shanduko, asi iine zvinowedzera kune shader
Munguva pfupi yapfuura kuburitswa kweshanduro nyowani yeDXVK 1.7.3 yakaziviswa, mune izvo sTsigiro yeiyo DXGIs nyowani yakaunzwa mukati Windows 10 Gadziridza 1809, pamusoro pegadziriro dzebug, kumwe kugadziridzwa kwemumvuri uye kunyanya kugadziridza.
Kune avo vasina kujairana neDXVK, vanofanirwa kuziva kuti raibhurari inoshanda kuburikidza nekushandurwa kweVulkan API mafoni.
Ipo DXVK Kunyangwe ichinyanya kushandiswa paStam Play, haisi iyo yega nzvimbo uko vashandisi veLinux vanogona kutora mukana weiyi inoshamisa tekinoroji. Zvakare inounza Vulkan-based D3D11 kuitiswa kweLinux neWine, Nezve kuita uye kugadzirisa paunenge uchimhanyisa Direct3D 11 mitambo muWine, sezvo ivo vachipawo rutsigiro rweDirect3D9.
1 Main makuru maficha eDXVK 1.7.3
Main makuru maficha eDXVK 1.7.3
Mune iyi vhezheni itsva, sezvambotaurwa pakutanga, zvinojekeswa izvozvo akawedzera akawedzera rutsigiro rweiyo nyowani DXGI maficha ichangoburwa muWindows 10, sarudzo yekuyera kumberi DXVK kuratidza pane HiDPI kuratidza, Kugadziriswa kwakasiyana siyana uye akasiyana magadziriso ekugadzirisa kukwirisa chinongedzo cheHUD pane yakakwira pixel density kuratidza.
Uyewo, shader kodhi yakagadzirwa yeD3D11 yakagadziridzwa kuitira kuti vatongi vagone kukwidziridza mashandiro emabasa kana pasina unzenza hunosunga.
Kugadziridza kwakaitwa kubvisa zvisina kufanira kudhirowa mashandiro, iyo yakavandudza mashandiro emimwe mitambo.
Nezve kugadziriswa, zvinonzi mitambo yekare inopwanya ichishandisa D3D9 pane masisitimu ane RADV controller akagadziriswa, pamwe neVulkan API yekumisikidza zvikanganiso pakagoneswa HUD.
Uye zvakare, zvinojekeswa izvo yakavandudzwa kodhi yebatch yekupa mashandiro kudzikisa huwandu hwekudhiza mafoni uchitamba Trine 4.
Yakagadziriswa nyaya nejira rinopa muYeverQuest 2 pane masisitimu ane NVIDIA mifananidzo makadhi.
Yakagadziriswa nyaya dzekupa muTrin 4 pane mamwe maNVIDIA GPUs uye masisitimu ane RADV mutyairi.
Zvinodiwa kwenzvimbo yekuvaka zvakawedzerwa; ikozvino unoda MinGW 8.0 kuvaka.
Iyi vhezheni nyowani inofanirwa kuverengerwa mune inotevera Proton kugadzirisa pamwe neSteam Play kuti ive nyore kutumirwa.
Finalmente kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve iyi nyowani vhezheni unogona kutarisa shanduko danda Mune inotevera chinongedzo.
tar -xzvf dxvk-1.7.3.tar.gz
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » DXVK 1.7.3 inosvika iine zvigadziriso, mashoma mashoma shanduko, asi iine zvinowedzera kune shader